Mahad Salaad oo jawaab Cajiib ah u diray Axmed Fiqi. "Durbaanka aad tumeyso waan fahamsanahay.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa jawaab yaab leh u diray Wasiirkii is casilay ee Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, isagoo ka jawaabay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Muqdisho.
Mahad Salaad ayaa jawaabtiisa ka dhigay qiso hore u dhacday ee degaanada Beeshoodu degto laga yaqaan, wuxuuna qoraalkiisa ku bilaabay:
Waxa jiray nin oday ah oo mingiska ka tumi jiray deegaanada Galmudug, lana dhihi jiray Dalays oo Cayr ahaa. Waxa xarun u ahaan jirtay meel LACASO la yiraahdo oo Gadoon agteeda ah.
Lacoso-na habeenka marka la gaaro nalal ayaa ka shidma, durbaan cid garaacaysa aan la aqoona waa ka yeeraa. Marka waxa la yiraahdaa jinka ayay hoy ama guri u tahay.
Wuxuu rabaa marka inuu sheego in Jinkii soo guuray isagana soo raacay. Berrin ayuu inta xaarxaartay oo durbaankiisii la soo baxay ayuu ku dhuftay hees uu rabo dadka inuu ku hogga tusaaleeyo in jinigii soo guuray hadana safar ku marayo dhulka Ayaanluhu deganyahay.
Marka wuxu yiri: “Jinigu Lacasow ka yimid cabsiiyow labo ka dilay, haddana laanlow maraa lag iyo bariyow rabaa Ayaanlowna lurahayaa!
W/Q: Xil. Mahad Maxamed Salaad